युगसम्बाद साप्ताहिक - समसामयिक विचारको संगालो - देवराज अर्याल
Thursday, 04.02.2020, 05:47pm (GMT+5.5) Home Contact
Monday, 06.02.2014, 03:07pm (GMT+5.5)
लोकतन्त्र के हो र लोकतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा–परिचर्चा हुँदैआएको छ । लोकतन्त्र निश्चित मूल्य र मान्यतामा आधारित राजनीतिक व्यवस्था भएको हुनाले यस विषयमा बहस हुन स्वभाविकै हो । सामान्य बुझाइको भाषामा भन्नुपर्दा लोकतन्त्र जनताको शासन हो । यस्तो व्यवस्थामा जनता सर्वोच्च र सार्वभौम हुन्छन । राज्यशक्तिको र शासकीय शक्तिको स्रोत पनि जनता नै मानिन्छन । जहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवधिकार, कानुनी शासन, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, बहुलवाद, बहुदलीयता जस्ता अधिकारहरू संवैधानिक रुपमा मै सुनिश्चित गरिएका हुन्छन । यस्ता अधिकारहरूले जनतालाई सार्वभौम बनाएको हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा जनता स्वतन्त्रतापूर्वका आफ्नो जीवन यापन गरिहेका हुन्छन । पछिल्लो समयमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आवश्यकता र महत्व बढदै गएको छ । विश्वका धेरैजसो देशहरू लोकतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छन ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था जनताको दृष्टिकोणबाट जति सान्दर्भिक छ यसलाई सफल रुपमा कार्यान्यन गर्न र संस्थागत रुपमा अगाडि बढाउन भने उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि जनतामा राजनीतिक चेतनाको स्तर विकास भएको हुनुपर्दछ । शासक–प्रशासक इमान्दार, जवाफदेही, पारदर्शी र फराकिलो सोचाइ बोकेको हुनुपर्दछ । आत्मअुनशासन, जिम्मेवारी, दायित्व र कतव्र्यप्रति निष्ठावान हुनु पर्दछ । अनिमात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था फस्टाउन सक्छ । लोकतन्त्रको संस्थागत रुपमा विकास हुन सक्छ । अन्यथा लोकतन्त्र कागले हिडन नजानेको कथा जस्तै हुनपुग्छ ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि ज्यादै महत्वपूर्ण हुनआउँछ । राजनीति दलहरू भनेको लोकतन्त्रका खम्बा हुन । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई अभ्यासमा लैजाने काम राजनीतिक दलबाट हुने गर्दछ । तसर्थ लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत रुपमा अगाडि बढाउन राजनीतिक दलहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय हिसावमा मात्र होइन दलभित्रकै आन्तरिक संरचना, कार्यशैली र व्यवहारमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापित गर्नु पर्दछ । दलभित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, अभ्यास र गतिविधि मजबुद भयो भने त्यसले वास्तविक अर्थमा नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ । पछिल्लो समयमा लोकतन्त्रको कुरा गर्दा राजनीतिक पार्टीहरूको लोकतान्त्रीकरणको बारेमा पनि बहस हुनथालेको छ । यसै सन्दर्भमा हालसालै लोकतान्त्रीकरण विषयमा एउटा कृति प्रकाशित भएको छ । जसको नाम रहेको छ–‘नेपालमा दलहरूको लाकतान्त्रीकरणः चुनौती र समाधान’ ।
‘नेपालमा दलहरूको लोकतान्त्रिकरणः चुनौती र समाधान’ २०७० सालमा प्रकाशित नवीनतम कृति हो । नेपालमा लोकतन्त्रको अवस्था र पार्टीहरूमा भैरहेको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई मूख्य विषय बनाएर प्रस्तुत गरिएको यस कृतिको प्रकाशन सेल्कार र एफईएसले संयुक्त रुपमा गरेका हुन । जसमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता, विशेषज्ञ र विश्लेषकहरूको विचारमूलक लेख समावेश गरिएको छ । प्रस्तुत पुस्तकमा ११ बटा लेख समेटिएका छन । जसमा नेकपा एमालेका नेता के.पी. शर्मा ओलीको ‘नेपालमा दल निर्माणःचुनौती र समाधान’, देवराज दाहालको ‘लोकतन्त्रमा दलहरू’, विद्या भण्डारीको ‘लोकतन्त्र र नेतृत्व’, शंकर पोखरेलको ‘द्वन्द्व व्यवस्थापनमा पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण’, काशीराज दाहालको ‘लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका’, एन.पी. साउदको ‘नेपालमा राजनीतिक दलभित्रको द्वन्द्व र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण’, गिरिराजमणि पोखरेलको ‘पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर हुने द्वन्द्वले लोकतन्त्रमा पर्ने असर’, प्रदीप ज्ञवालीको ‘पार्टीगत द्वन्द्वको व्यवस्थापन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण’, पुरुषोत्तम दाहालको ‘लोकतन्त्रमा स्वाभाविक द्वन्द्वको सौन्दर्य’, हिक्मत कार्कीको‘दलीय द्वन्द्वः संकट र समाधान’ तथा भेषराज अधिकारीको ‘लोकतन्त्रमा अन्तरदलीय र दलीय द्वन्द्व व्यवस्थापन’ शीर्षकका विचारमूलक लेखहरू रहेको छन ।
पुस्तकमा समेटिका सबै लेखहरू आफैंमा गहन र ओजपूर्ण विचारले भरिपूर्ण छ । लोकतन्त्र, द्वन्द्व र गतिशीलता सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तको जगमा लेखिएका प्रस्तुत लेखहरूमा विभन्न देश भएको प्रयोग र उदाहरण तथा अनुभवहरूलाई पनि समेटिएको छ । त्यसमा समेटिका व्यहारिक तर्कले प्रस्तुत लेखहरूको गहनतालाई स्थापित गरेको छ । साथै व्यहाहारिक पक्षलार्य उजागर गर्न खोजिएको छ । यसै सन्दर्भमा के.पी. शर्माले आफ्नो लेखको निचोडमा भननु भएको छ– सधैभरि आइडियालोजीको रटान गरेर मात्र गन्तव्यमा पुग्न सकिदैन । आइडिया पनि लगाए काम गर्नु पर्दछ । आइडिया लगाएर गरेका कामले आइडियालोलाई पछाडि पारेका प्रयाप्त उदाहरण छन । नेपालमा कम्युनिष्टहरूले पुष्पलालका विरुद्ध आइडियोलोजीले होइन आइडियाले निमोठने काम गरेका हुन । द्वन्द्वको प्रसंग उठाउँदा यो पक्षलाई ख्याल गर्नु पर्दछ ।
वास्तवमा अहिले विश्वमा आइडियाले धेरै काम गर्ने गरिएको छ । यस्ता धेरै सान्दर्भिक उदाहरण प्रस्तुत लेखहरूमा समेटिएका छन । तसर्थ राजनीतिमा चाख राख्नेहरूले एक पटक यो पुस्तक पढनुपर्ने खालको छ ।
अहिलेको व्यस्त समयमा लेख लेख्ने र पुस्तक प्रकाशन गर्ने कुरा निकै नै झण्झटिलो कार्य हो । बिद्युतीय माध्यम र अनलाइनले आमसंचारको क्षेत्रमा प्रभाव जमाइरहेका बेला छापा माध्यम वास्तवमै छायाँमा परेको छ । तर, पनि छापामाध्यमको महत्व घटेको भने छैन । छापा माध्यममा जाने प्रवृत्तिमात्र घटेको हो । यस्तो समयमा राजनीतिक क्षेत्रका महत्वपूर्ण हस्तीहरूको लेख संकलन गरी त्यसलाई पुस्तकारको रुपमा दिएको छ । यस कार्यमा सम्पादकको रुपमा रहेर लेखक भेषराज अधिकारीले गरेको प्रयत्न वास्तवमै प्रशंसनीय छ । यो पुस्तक आकारका हिसावले सानो भए पनि विचारको हिसावले ज्यादै चम्किलो ज्योति हो । जसले आगामी दिनमा दलहरूको लोकतान्त्रीकरणको सन्दर्भमा बुझ्न र अनुसन्धान गर्न चाहनेहरूका लागि मार्गनिर्देशन बन्न सहयोग गर्ने छ । यसअर्थमा पनि पुस्तकका सम्पादक र प्रकाशकहरू धन्यवादका पात्र हुनु हुन्छ ।